Ninkii fududeeyey weerarkii Villa Somalia oo dil lagu xukumay – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Ninkii fududeeyey weerarkii Villa Somalia oo dil lagu xukumay
Mareeg.com: Maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ayaa dil toogasho ku xukuntay 2 wiil oo uu ka mid yahay ninkii fududeeyey weerarkii madaxtooyada lagu qaaday bishii Ramadaan.
Xasan Maxamed Xasan oo ahaa ninkii gaari uu watay gudaha madaxtooyada ku geeyey 3 nin ee weerar iyo ismiidaamin ku qaaday Villa Soomaaliya iyo labo kale ayaa dil lagu xukumay.
Sidoo kale, maxkamadda ciidamada ayaa dil ku xukuntay magaciisa lagu sheegay: Aadan Maxamed Xasan, kaasoo lagu eedeeyey inuu dhawaan degmada Wadajir ku dilay Maxamed-deeq Cabdi Aadan oo ahaa xisaabiye idman oo ay Wasaaradda Maaliyadda u soo xilsaartay Wasaaradda Warfaafinta Soomaaliya.
Maxkamadda ayaa sheegtay in Aadan Maxamed Xasan oo ka mid ah labada eedeysane ee loo haystay dilka Maxamed deeq uu maxkamadda ka hor qirtay in uu gacantiisa ku dilay 19-qof oo ay ku jireen xisaabiye Maxamed Deeq, Xildhibaan la oran jiray Cabdicasiis, haweeney la oran jiray Xaawo Aadan iyo Xafso Cabdi Nuur.
Maxakamaddu waxey sidoo kale sheegtay in wiilkaasi gacan ka geystay dilka 13-kale oo isugu jiray shacab iyo ciidan, taasi oo wadarta guud noqoneysa 32 qof oo la dilay.
Maxkamadda ayaa markii ay dhageysatay dacwadda waxa ay sheegtay in Aadan Maxamed Xasan oo ahaa kii maxkamadda ka hor qirtay in uu dilay dad aad u fara badan iyo Xasan Maxamed Xasan oo ahaa ninkii Alshabaab gacan ki siiyey weerarkii ay madaxtooyada ku qaadeen bishii Ramadaan lagu xakumay dil toogasho ah.
Dhanka kale, maxkamadda ayaa xabsi daa’in ku xukuntay wiil kale oo magaciisa lagu sheegay Bashiir Maxamed Xasan, sida uu ku dhawaaqay Afhayeenka Maxkamadda Cabdullaahi Maxamed Muuse “Keyse”.
Ninkaan ayaa lala qabtay Aadan Maxamed Xasan oo ah ninka dilka toogashada lagu xukumay. Maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya oo inta badan askarta dil ku xukumi jirtay ayaa u muuqata iney markaan xooga saareyso dhalinyarada Alshabaabka ah ee lasoo qabto.
Madaxweyne Xasan oo booqasho kedis ah ku tegay Garbahaarrey